XOG MUHIIM AH: Madaxda ugu sareysa ee DF Soomaaliya oo leh kulan deg deg ah oo ay uga hadlayaa Qaraarkii baarlamaanka Faderaalka. – Puntlandtimes
XOG MUHIIM AH: Madaxda ugu sareysa ee DF Soomaaliya oo leh kulan deg deg ah oo ay uga hadlayaa Qaraarkii baarlamaanka Faderaalka.
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya ayaa sheegaya in ay kulan deg deg ah leeyihiin Madaxda ugu sareysa dawladda Faderaalka, gaar ahaana Madaxweynaha, Ra`iisulwasaaraha iyo labada guddoomiye ee golaha Shacabka Faderaalka oo ay kaga hadlayaan xaaladdaha dalka.
Xog soo gaartay Puntlandtimes ayaa sheegaya in laga wada hadlay faragalinta wadamada Shisheeye, gaar ahaana Imaaraatka Carabta iyo sidii wadajir looga gaashaaman lahaa, oo aan gabi ahaanba looga dhigi lahayn kuwa qolo gaar ah loola dan leeyahay.
Sarkaal aad ugu dhaw Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u sheegay Puntlandtimes in uu Madaxweyne Farmaajo berri galinka hore saxiixi doono xeerkii tooska ahaa ee ay maanta soo saareen baarlamaanka Faderaalka ee dalka.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee dawladda Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo kasoo jeeda Somaliland ayaa sheegay in aysan suuragal aheyn in cid gaar ah uu saameyn ku yeesho qaraarkan, wuxuuna ka codsan doonaa madaxda dawladda Faderaalka in wax laysku xeeriyo.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay suuragal tahay in madaxdu ay ku kala aragti duwanaadan xaaladdan, balse ay u badan tahay in la qaato hal qaraar oo ku saabsan meelmar in laga dhigo go`aanka baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya.
Xildhibaanada ayaa aad ugu cadaadinaya Madaxweynaha Soomaaliya in uu deg deg ku saxiixo qaraarkan, si shirkada DP WORLD looga cayriyo Soomaaliya, waxayna maanta ka sheegeen madasha baarlamaanka in aan la aqbali doonin arrimaha socda oo dhan.
Waa ku faraxsanahay in Baarlamaankeenu ka waayo go;aan lagu mabnuucayo shirkadda Imaaraadka balsa waa shirkad waddanka joogta oo shaqaynaysa waxaa loo skin waxay muddy aywaddanka Kagan baro waayo mamnuucidda waxay cadaynaysaa wax soo soda leaking aan markets wax fall ah hating waxaan waxba Baarlamaanku in uu waayo wastage ay shirkadda wastage Soomaaliya ugu baxayso
Waan ka xumahay khaladka keyboarka
Lula ma xaga dhimirkad tahay kalay hargaysa anagaa ku dawayne cid ku qabsataanad haysane